प्रदीप ज्ञवाली नेपालको नयाँ अर्थमन्त्री, यस्तो छ उनको बायोडाटा !
ARCHIVE, OFF THE BEAT » प्रदीप ज्ञवाली नेपालको नयाँ अर्थमन्त्री, यस्तो छ उनको बायोडाटा !
काठमाडौं - नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीवार सानो आकारको मन्त्रिमण्डल विस्तारको तयारी गरेका छन् । ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएलगत्तै एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल र सचिव प्रदीप ज्ञवालीले मन्त्रीको शपथ लिने तयारी भएको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार ज्ञवालीले अर्थमन्त्रालयको जिम्मा पाउने छन् भने पोखरेल उपप्रधानमन्त्री बन्ने छन् ।
नेपालको नयाँ अर्थमन्त्री बन्न लागेका ज्ञवाली १३ सेप्टेम्बर १९६२ मा गुल्मीमा जन्मिएका थिए । नारायणदत्त ज्ञवाली र पुण्य कला ज्ञवालीका छोरा ज्ञवाली यसअघि पर्यटनमन्त्री बनेका थिए । सन् २००६ देखि सन् २००७ मा उनी पर्यटनमन्त्री बनेका थिए । ज्ञवाली नेकपा एमालेका पूर्व प्रचार विभाग प्रमुख र हालका सचिव हुन् ।